Torohevitra 9 amin'ny fitambarana haka sary tsy mampino | Martech Zone
Mety ho iray amin'ireo fanangonana tsara indrindra amin'ny torohevitra momba ny sary hitako an-tserasera izany. Lazaina ny marina, mpaka sary mahatsiravina aho. Tsy midika izany fa tsy manana tsiro tsara aho. Talanjona foana aho amin'ny zavakanto tsy mampino vokarin'ny namantsika Paul D'Andrea - mpaka sary fanta-daza ary namana tsara eto Indianapolis. Miantso azy izahay mba hanao asan'ny mpanjifa betsaka ho anay satria manao tsinontsinona ny fampiasana sary stock ho an'ny tranokala.
Ao amin'ny lahatsarin'izy ireo farany, COOPH manolotra Torohevitra Composition 9 ho an'ny sary nahazo loka. Nahatonga ahy handinika sary indray izany satria na dia miasa amin'ny lohahevitra aza ilay mpaka sary dia mazava fa mieritreritra ny mpihaino azy ihany koa ity mpanakanto ity rehefa maka ny sariny izy ireo.
Soso-kevitra momba ny fitambarana 9
Rule of Thirds - Apetraho amin'ireo teboka mahaliana ireo zotram-pifandraisana misy ilay sehatra voatsinjara mitsivalana sy mitsivalana. Mametraha singa lehibe manandanja.
Andalana mitarika - Mampiasà tsipika natoraly hitarika ny maso mankeny amin'ilay sary.
Diagonaly - Ny tsipika diagonaly dia mamorona hetsika lehibe.
hanisy - Mampiasà sary voajanahary toy ny varavarankely sy varavarana.
Sary hatrany amin'ny tany - Mitadiava mampiavaka ny lohahevitra sy ny fiaviany.
Fenoy ny frame - Manakaikeza ny lohahevitrao.
Maso Dominant Center - Apetraho eo afovoan'ny sary ilay maso manjaka mba hanomezana fiheverana fa manaraka anao ny maso.
Modely sy famerimberenana - Mahafinaritra ny endriny ny lamina, fa ny tsara indrindra dia rehefa tapaka ny lamina.
Symmetry - Mahafinaritra ny maso ny symmetry.
Angamba ny torohevitra tsara indrindra nomen'i Steve McCurry dia ny hoe ny lalàna dia natao ho simba ary hahitana ny fombanao manokana.
Fanamarihana: Tsy manana alalana hizara ny sary izahay - ka mazotoa tsindrio ity lahatsoratra ity hijery ilay horonantsary raha tsy hitanao etsy ambony. Ampirisihiko ianao hitsidika ihany koa Galeria an-tserasera Steve McCurry ary raiso ny asa mahatalanjona vokariny nandritra ny taona maro.
Tags: maso manjaka afovoanyfifehezancoofdiagonalsmiseho amin'ny tanyfenoy ny saryhanisytsipika mitarikalamina sy famerimberenanasarysary toro-hevitrahitondra ny ampahatelonySteve McCurrysymmetry
Paikady 7 ampiasaina amin'ny famaritana ny pitsopitsony momba ny vidiny
Shotfarm: tamba-jotra atiny ho an'ny vokatra ho an'ny marika sy mpanamboatra
7 Jun 2016 amin'ny 12:39 AM
Douglas Karr tokony hiara-hiasa amin'i Steve McCurry